Tsvaga Yekushambadzira Shandisa kwaQ3 2015 Inoratidza Inotyisa Shanduko | Martech Zone
Kenshoo's vatengi vanoita macampaign ekushambadzira edhijitari anomhanya mune dzinopfuura nyika dze190 uye anosanganisira dzinenge hafu yeFortune 50 kune ese gumi epamusoro epasirose agency agency. Iyo yakawanda data - uye nekutenda Kenshoo iri kugovera iro data nesu pagore roga roga kuti tione maitiro ari kuchinja.
Vatengi vanovimba nemafoni nhare kupfuura nakare kose, uye vashambadzi vepamberi vari kuteedzera nemushandirapamwe unowedzera wakagadziriswa wakaunza mhedzisiro mune zvese zvakabhadharwa zvemagariro nekutsvaga. Chris Costello, Director weKushambadzira Ongororo yeKenshoo.
Hakusi kungokura kwemafoni kuri kuitika zvakasiyana zvakasiyana gore rino:
Yemagariro Media Kushambadzira kuratidzwa kwakadzikira makumi matatu neshanu zvichienzaniswa negore rapfuura nepo mabhatani akaderera ne36% uye huwandu hwenzanga hwekudzvanya-kuburikidza neyakawedzera 75%.
Kubhadhara Kutsvaga Kushambadzira kuratidzwa kwakawedzera 3% zvichienzaniswa negore rapfuura nepo mabhatani akawedzera 16% uye iyo yekudzvanya-kuburikidza chiyero yakawedzera 12%.
Mobile Kushambadzira kuratidzwa kwakawedzera 73% zvichienzaniswa negore rapfuura nepo kubaya kwakawedzera 108%. Muchokwadi, iyo yekushambadzira nhare inoshandisa kuwedzera yakaipisisa 69% nepo desktop uye piritsi mari yakaramba yakati sandara.
Iyo imwe inonakidza maitiro, mumaonero angu, ndiko kuderera kwemutengo nekudzvanya uye kuwedzerwa kudzvanya-kuburikidza chiyero.
Kenshoo zvakare yakaburitsa maitiro eakabatanidzwa Asia Pacific Japan matunhu pamwe neEuropean, Middle East uye Africa matunhu.
Tags: 2015americaskenshoomobile kushambadzira kushandisaakabhadhara kushambadzira kushandisaakabhadhara kutsvaga kushambadzira kushandisaq3 2015kota yekushambadzira kushambadziratsvaga kushambadzira maitiroyekutsvaga kutsvaga kushambadzirasocial ad kushambadzasocial advertising advertisingsocial media kushambadzirapasocial media kushambadzira kushandisa